CO2 ဖမ်းယူကြောင်းအုတ် | | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
En ဂျပန် ကွန်ကရစ်များထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အုတ်အားဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ အားသာချက်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်အိမ်များကိုလျှင်မြန်စွာတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုသည်ရိုးရှင်းပြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ ဆီလီကွန်သဲကိုလေလုံသည့်မှိုများတွင်ထည့်သွင်းသည်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်.
ထို့နောက် epoxy ကိုပေါင်းစပ်လိုက်ပြီး၎င်းကိုကောင်းစွာပေါင်းစပ်ပြီးကောင်းကောင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကောင်းစွာကျစ်လစ်သည်။
ဤအုတ်များသည်ကွန်ကရစ်ထက် ၂၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုအားကောင်းသဖြင့်၎င်းကိုဤပစ္စည်းအတွက်ကောင်းသောအစားထိုးစေသည်။
လိုအပ်ခြင်းအားဖြင့် CO2 ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသောဤညစ်ညမ်းသောဓာတ်ငွေ့များအတွက်အုတ်များဖြစ်လာနိုင်သည်။
အုတ်ခဲများသည်အဆောက်အအုံအမျိုးမျိုးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်း၏သက်တမ်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အနှစ် ၅၀ ခန့်ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုတည်ဆောက်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် ဖော်ရွေသောနေအိမ်များနှင့်အဆောက်အ ဦး များ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ။
လေထုညစ်ညမ်းမှုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လောင်းရမည် ဂေဟစနစ်ဗိသုကာ နှင့်ရေရှည်တည်တံ့။
ဤအုတ်များသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်လျှော့ချနိုင်သည် CO2 အဆင့်ဆင့်.
အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့်နည်းစနစ်များကိုသုံးပါ CO2 စုပ်ယူသည် ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပူးပေါင်းရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤအုတ်များသည်ရာသီဥတု၏ရန်သူကြီးဖြစ်သောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူ ဦး ရေအတွက်ဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနည်းပါးသောပစ္စည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သည်အရေးကြီးသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း » အစိမ်းရောင်အိမ် » CO2 ဖမ်းယူကြောင်းအုတ်
Erik adan ဟုသူကပြောသည်
ထုတ်ကုန်သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စစ်ဆေးနိုင်သနည်း၊ ၎င်းသည် CO2 ကိုသန့်စင်ရန်ဖြစ်သည်။
Erik Adan အားပြန်ပြောပါ
FARID RAZIEL ALVAREZ MENDOZA ဟုသူကပြောသည်
FARID RAZIEL ALVAREZ MENDOZA သို့ပြန်ပြောပါ
ဘရိုင်ယန် GALVEZ ဟုသူကပြောသည်
BRAYAN GALVEZ အားပြန်ပြောပါ
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ဘယ်လောက် CO2 နှင့်ဘယ်အခြေအနေတွင်ထိုးသင့်သနည်း။
Daniela Diaz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်စီမံကိန်းအားကျွန်ုပ်၏တက္ကသိုလ်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဂေဟဗေဒဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်တင်ပြလိုသောကြောင့်ဤစီမံကိန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်အားပိုမိုနက်ရှိုင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိူင်လျှင်ငါသိချင်ပါတယ်။
Daniela DIaz အားပြန်ပြောပါ
Elvis Ramos Calderón ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောညပါ CO2 COXNUMX စုပ်ယူသောအုတ်များနည်းပညာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စီမံကိန်းအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကတက္ကသိုလ်မှအဆိုပြုချက်တစ်ခုအနေဖြင့်တင်ပြရန်ကျွန်ုပ်အားသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Elvis Ramos Calderon အားပြန်ကြားပါ
Mario Alarcon ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ သိပ္ပံပြပွဲအတွက်ကျောင်းသားများကိုဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အဆိုပြုခဲ့တယ်။ မင်းကငါ့ကိုနောက်ထပ်အချက်အလက်တွေပို့ပေးပါ ဦး ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ximena sanchez ဟုသူကပြောသည်
ximena sanchez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာည မင်းရဲ့ပရောဂျက်ကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်၊ ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုပိုမိုသောအချက်အလက်များနှင့်ငါ့ကိုပေးဒါကြင်နာလိမ့်မယ်။
ဒန်နိုသည်၎င်း၏ဒိန်ချဉ်တွင် bioplastic ကိုအသုံးပြုသည်
အုန်းသီးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၎င်း၏ applications များ